Lufthansa dia mahazo jet Airbus A10-350 faha-900
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa dia mahazo jet Airbus A10-350 faha-900
Lufthansa dia manantena ny fahatongavan'ny Airbus A350-900 fahafolo anio. Ny fiaramanidina mitondra ny fisoratana anarana D-AIXJ dia nomena anarana taorian'ny tanànan'i Erfurt, ary antenaina hipetraka amin'ny tobin-trano fonenany any Munich amin'ny mitataovovonana. Andro vitsy taty aoriana, ny A350-900 manasongadina ny livery Lufthansa vaovao dia ho iray amin'ireo manintona indrindra amin'ny Family & Music Days ao amin'ny seranam-piaramanidina Munich: Amin'ny 9 sy 10 Jona, ny fiaramanidina maoderina lava indrindra eran'izao tontolo izao dia azo iainana akaiky. Ireo mpankafy fiaramanidina dia tokony tsy hanadino ny fotoana mety amin'ny sabotsy 9 jona, raha ny mpitsidika rehetra - na antitra na tanora - dia afaka mijery ilay trano itadiavana loka marobe. Misokatra ny sidina raha hijery eo anelanelan'ny 11 am sy 5 hariva amin'io andro io ihany.
Ny Lufthansa A350-900 no fiaramanidina mpandeha voalohany manerantany nanamboatra ny hazavany amin'ny fahazavan'ny andro. Ilay foto-kevitra hazavana faran'izay mahery vaika, izay mahatonga ny fivezivezena ho tony kokoa sy ahazoana aina, dia nahazo ny mari-pankasitrahana ny lokan'ny jiro alemana 2018. Ity no A350-900 an'ny sidina faharoa izay nahazo loka miavaka: Talohan'izay dia nahazo ny A350 Economy Class an'ny fiaramanidina ny German Design Award 2018 ao amin'ny sokajy "Famolavolana vokatra tena tsara".
Ny A350-900 no fiaramanidina lavitra indrindra maoderina sy sariaka tontolo iainana eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia mandany solika jet 25 isan-jato kely kokoa, miteraka emission 25 isan-jato ary ambany kokoa noho ny karazana sidina azo ampitahaina. Ny fiaramanidina voalohany amin'ny 15 dia niditra tamin'ny serivisy avy any amin'ny tobin'i Munich tamin'ny volana feb tamin'ny taona lasa. Ny A350-900 dia mahazaka mpandeha 293: 48 amin'ny Class Business, 21 amin'ny Class Economy Premium ary 224 amin'ny Economy Class.
Momba an'i Lufthansa
Deutsche Lufthansa AG, fantatra matetika amin'ny anarana hoe Lufthansa, no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra alemana ary, raha ampiarahina amin'ireo zanany, dia ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra koa any Eropa na amin'ny habeny sy ny mpandeha entina mandritra ny taona 2017. ny anaran'ny orinasa dia avy amin'ny teny alemana , 'Air' Luft ary Hansa, ny ligin'i Hanseatic. Lufthansa dia iray amin'ireo mpikambana mpanorina dimy an'ny Star Alliance, ny firaisam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra eran-tany, niforona tamin'ny 1997.